Nepal Politics News | राजनीति समाचार | Current Political Affairs
January 18, 2019 Annapurna TV
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता केशवराज रेग्मीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । सभापति देउवाले आज शोक विज्ञप्तिमार्फत उनको निधनबाट पार्टीले एक अग्रज नेता गुमाएको र पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । काङ्ग्रेस कास्कीका अग्रज नेता रेग्मीको हिजो काठमाडौँमा ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएको पार्टीले जनाएको छ । विसं २०३० मा गण्डकी छात्र समितिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रेग्मी नेपाल तरुण दल कास्कीका संस्थापक थिए । स्व रेग्मीले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक गरी करीब पाँच वर्ष जेल जीवन समेत बिताउनु भएको थियो…
नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना, त्यागी नेता केशव रेग्मीको निधन भएको छ । काङ्ग्रेस कास्कीका पूर्व सचिवसमेत रहेका उनकोे बिहीबार राति आफ्नै निवास गोँगबुमा निधन भएको हो । लामो समयदेखि श्वासप्रश्वास रोगबाट ग्रसित रेग्मीलाई ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल उपचार पछि केही दिन अगाडि मात्र आफ्नै निवासमा ल्याइएको थियो । पशुपति आर्यघाटमा आज बिहानै उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ । यसअघि उनको पार्थिव शरीरमा काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पार्टीको झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । विसं २०२३ सालमा गण्डकी छात्र समितिको सदस्य…
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सुशासन, शान्ति सुरक्षा र विकासका सवालमा सम्पूर्ण पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्रेस युनियन चितवन शाखाले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताका समस्याहरु देखिएका ठाउँमा काङ्ग्रेसले आवाज उठाउने बताए । उनले सरकार ठीक बाटोमा आउँदैन भने ठीक ठाउँमा ल्याउन काङ्ग्रेस कम्मर कसेर अगाडि बढ्ने बताए । उनलेभने, “जनताका आवाजलाई सधैँ दवाउन सकिदैन, देशका समस्यामा लापरवाही गर्न पाइदैन र त्यसका लागि प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्छ ।” वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, “देशका समस्यामा लापरवाही भए जनताले पनि आफ्नो…
मुलुकमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार, मंहगी, वाइडबडी प्रकरण, निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या काण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै कांग्रेस भातृ संस्था तरुण दलले पोखरामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा नेपाल तरुण दल कास्कीको व्यवस्थापनमा आउँदो माघ ११ गते सरकारको पछिल्ला कामकारवाही विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिने भएको जनाइएको छ । प्रदर्शनलाई बृहत बनाउन बिहीबार पोखरामा बसेको तरुण दलको तयारी बैठकले पार्टीका सबै कमिटी परिचालित गर्ने निर्णय भएको नेविसंघ कास्कीले जनाएको छ ।
January 17, 2019 January 18, 2019 Annapurna TV
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि गरेको हातपातको विषयलाई लिएर दुई प्रतिपक्षी दल दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली काँग्रेस यस विषयमा दुई कित्तामा देखिएका हुन् । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने दुबैको माग भएपनि नेपाली काँग्रेसले मन्त्री यादवलाई मात्रै कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस सचिव विद्यानाथ झाको पक्षमा उभिएको छ भने नेकपा कुटपिट गर्ने मन्त्री यादव र गालीगलौज गर्ने सचिव झा दुबैमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। दुबै दलले यसै विषयलाइृ लिएर सरकारलाई…
January 17, 2019 Annapurna TV
नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। केसीसँग भएको सम्झौता र केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सुझावविपरीत संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको उनको भनाइ छ। विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित गर्नुअगाडि यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता थापाले संसदीय समितिबाट पारित भएर सदनमा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार सम्भव नभएको बताए। ुकेसीसँग विगतमा भएको सम्झौताका बुँदाहरुलाई…
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै इलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने पहल गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख सहितको एक टोली इलाम जाने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सहितको टोली इलाम जान लागेको हो । टोलीले इलाम पुगेर डा. केसीलाई काठमाडौं फर्किन मनाउन प्रयास गर्नेछ । गत पुस २५ गतेदेखि अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको र तत्काल आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । ९ दिनदेखि अनसनरत अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा…
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले बुटवललाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै बिहीवार प्रदर्शन गरेको छ । दिउँसो राजमार्ग चौराहबाट शुरू भएको जुलुस बजार परिक्रमा गर्दै ट्राफिक चोकमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । कांग्रेसले कार्यक्रमलाई जनप्रर्दशन तथा खबरदारीसभा भनेको छ । जुलुस र सभामा भएको सहभागिता देखेर कांग्रेसका स्थानीय नेता उत्साहित भएका छन् । प्रदेश पार्टीको आधिकारिक निर्णय विना नै कांग्रेस रूपन्देहीले बुटवललाई राजधानी घोषणा गर्न माग राख्दै खबरदारीसभा गरिरहेको छ । उनीहरुले प्रदर्शनमा पचास लाख मान्छे आएको दावी गरेका छन् ।
प्रदेश- ५, राजनीतिLeaveacomment
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को म्याद थपिएको विरोधमा नेविसंघकै नेता–कार्यकर्ताहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा धर्ना दिएका छन् । मोटरसाइकल र्‍यालीसहित देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर दर्जनौं नेता–कार्यकर्ताहरुले धर्ना दिएका हुन् । नेविसंघको झण्डा बोकेका उनीहरुले ‘नेबिसंघ जिन्दावाद’को नारा लगाएका थिए । माइक्रो बससमेत रिजर्भ गरेर बुढानिलकण्ठ पुगेका उनीहरुले देउवा निवास अगाडि धर्ना दिएका छन् । विधानअनुसार बुधबार राति १२ बजेपछि नेविसंघको म्याद थियो, तर कांग्रेसले तत्काललाई हालकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिएको छ । पटक पटक म्याद थपिँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन नहुने भन्दै नेविसंघका…
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले गैरकानुनी रुपमा विदेशी बैंकहरुमा लुकाइएको कालोधनको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार बिहान ट्विट गर्दै थापाले भनेका छन्,‘‘गैरकानुनी रुपले विदेशी बैंकहरुमा लुकाइएको कालोधनबारे सरकार र सम्बद्ध निकायले तत्काल छानबिन गरोस् । शंकास्पद व्यक्ति र संस्थाको बैंक खाता तत्काल रोकियोस् । संसदले यस विषयमा सशक्त कदम उठाउनुपर्छ । अवैध सम्पति जफत गर्न र अपराधीलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दह्रो कदम चाल्ने आशा गर्दछु । ’’ गैरकानुनीरुपले बिदेशी बैंकहरुमा लुकाईएका कालोधनवारे सरकार र सम्बद्ध निकायले तत्काल छानविन गरोस्।शंकास्पद व्यक्ति/संस्थाको बैंकखाता तत्काल रोकियोस्।संसदले यस विषयमा सशक्त…